स्वाइन फ्लु संक्रमित संख्या १० पुगे
Wednesday, 25 February 2015 06:21
मुलुकमा प्रयोगशाला परीक्षणबाट स्वाइन फ्लु प्रमाणित हुने बिरामीको संख्या बढदै गएपछि भाइरसको स्ट्रेन (जाति) खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) मा परीक्षणबाट मंगलबारसम्म स्वाइन प्रमाणित बिरामीको संख्या १० पुगेको हो ।
‘स्ट्रेन (जाति) हाल भारत वा गतवर्ष राजधानीमा देखिएको स्वाइनको भाइरस जस्तै छ कि फरक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन भाइरोलोजिस्टलाई भनिसकेका छौं,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘यदि यस पटक पोहोरकै जस्तो भाइरसले संक्रमण देखिएको भए राजधानीवासीमा यसविरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित भइसकेको हुन्छ । र, यस पटक उपत्यकाबाहिर देखिने बढी सम्भावना छ ।’राजधानीमा गतवर्ष स्वाइन फ्लुबाट १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीन सय जनामा प्रयोगशाला प्रमाणित संक्रमण देखिएको थियो ।
हालसम्मको अवस्थाअनुसार स्वाइन फ्लु संक्रमित सयमध्ये करिब एक जनामा संक्रमण कडा रुपमा देखिने सम्भावना हुन्छ । उच्च जोखिम समूहमा रहेकाहरुलाई स्वाइनबाट बचाउन विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेसमेत डा. मरासिनी बताउँछन् ।
अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको तथ्यपत्रअनुसार दम, श्वास रोगको समस्या भएकाहरुलाई स्वाइन फ्लुको संक्रमण हुने बढी खतरा हुन्छ ।
मधुमेह, मुटु, कलेजो र स्नायु रोग भएकाहरुसमेत संक्रमणको उच्च जोखिममा रहन्छन् । गर्भवती महिला, बूढापाका र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमणको खतरा अन्यको दाँजोमा बढी हुन्छ । एचआईभी र एड्स वा अन्य कारणले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाहरु पनि उच्च जोखिममा हुन्छन् ।–कान्तिपुर दैनिक